Haya’adaha Swidhishka | dinarattigheter
Xuquuqaha aad leedahay
Cadaadis iyo xoog-u sheegad sharaf ku salaysan
Heshiiska caalamiga ah ee carruurta
Heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda haweenka
Muxuu leeyahay sharcigu?
Jirdil jireed iyo mid maskaxeed
Sharciga cunsuriyyeynta ku saabsan
Sharciga guurka ku saabsan
Sharciga jirdilka ka yaal
Xad gudubka Fara xumayska (galmood aan raalli laga ahayn)
Sharci ahaan sida loo qeexay qasab waxyaalo galmood la xiriira
Sharci ahaan sida loo qeexay uga faa’idaysi wax galmood la xiriira
Xafiiska adeegga bulshada
Sharci ahaan sida loo qeexay kufsi/xoogitaan carruur
Sharci ahaan sida loo qeexay kufsiga/xoogitaanka
Khuraafaadka laga aaminas yahay dhibbana saxda ah
Ma ka cabsaanysaa in qof lagugu daro?
Ma guursan karaa qofkaan rabo?
Waddanka bannaankiisa markii ay noqoto
Quraafaadka laga aaminsan yahay xuubka bikrada
Aqoonsi qarsoodi ah
waxa saxa ah internetka
Maxuu yahay himad galmood?
Ku ag-koritaan si xun u isticmaal maandooriye
Ka akhriso wax kasii dheeraad ah.
Side baan caawinaad ku heli karaa?
Sidaan ayaad xiriir ku heli kartaa
U dacwoodka booliska
Dacwada booliska ka dib
Ka noqosho dacwo boolis
Ma waxaad dareemeysaa hanjabaad?
Ma handadaad baad dareemaysaa
Heeganka gabdhaha iyo dumarka
Qaabilaadda dhallinyarada iyo iskuulka
Ka dib maxaa dhacaya?
Gabdhaha iyo wiilasha ka weyn 18 sano
Wiilasha iyo gabdhaha ka yar 18 sano
Caawinaad haya’d Swidhish ee waddanka debaddiisa?
Haddii aad dhalasho Swidhish ah haysato, qaxooti tahay ama aadan waddan lahayn oo aad deggen tahay Swidhan waxaad caawinaad ka heli kartaa safaaradaha iyo qunsuladaha Swidhan u fadhiya waddamada kale markii aad waddanka debaddiisa joogto. Haddii aad xaalad xun ku sugan tahay tusaale ahaan haddii lagu handado, xoog laguu sheegto, guur lagugu qasbo ama lagugu qasbo in aad waddan kale joogto baasaboor iyo tigid aad ku soo noqoto adiga oo aan haysan waxay safaaradaha iyo qunsulidaha Swidhan kaa caawini karaan:
In ay talo iyo taageero ku siiyaan.
Iney kula xiriiriyaan qaraabadaada ama xalliyaan dhibaato kale
In ay la xariiraan qareen difaac, dhakhtar ama turjibaan.´
In ay kuu sameeyaan baasaboor ku meelgaar ah ama baasaboor rasmi ah.
In ay lacag aad Swidhan ugu soo noqoto ku deymiyaan.
Laakiin marmar waa ay adkaan kartaa in caawinaad la helo, sida haddii uu sharciga waddanka aad markaas ku sugan tahay ka duwan yahay. Haddii aad dhalasho ka haysatid Swidhan iyo waddanka aad u safraysidba, oo lagugu tirinaayo in aad dhalashadiisa haysato waddankaas, markaas waa ay ku adkaan kartaa wasaaradda arrimaha dibadda, safaaradaha iyo qunsuliyadaha Swidhan in ay ku caawinaan maaddaama ay tahay in ay markaas raacaan sharciyada iyo qaynuunada waddankaas. Wax Swidhan dambi ka ah uma baahna in ay dambi ka ahaadaan waddan kale. Sidaas darted haddii ayna waddankaas kale hay’adihiisu wada shaqays rabin waa ay ku adkaan kartaa wasaaradda arrimaha debadda in ay kaa caawinto sidii aad Swidhan ugu soo noqon kari lahayd oo kale.
Ka akhriso wax ka dheeraad ah wasaaradda arrimaha dibadda (UD) boggeeda ka hadlaya dambiyada sharafeed ee waddanka debadiisa ka dhaca
FIIRO GAAR AH! Halkaani ma laha badhanka ka baxsiga ee bogga degdegta looga bixi karo.
Xasuusnow sharciga Swidhan wuxuu qabaa!
Waxaad xaq u leedahay marwalba in aad maya tiraahdo guurka haddii aadan rabin in aad guursato. In qof la handado ama guur lagu qasbo tusaale ahaan ayadoo xoog loo sheeganayo waa sharci darro. Labada is guursanaya waa in ay goob joog u yihiin arooska oo labaduba raalli ka yihiin guurka. Haya’adaha Swidhan waa diidi karaan in ay aqoonsadaan guur ka dhacay waddan kale oo qasab ku yimid. Laakiin haddii uuba qofkii guursaday waa ay adkaan kartaa in maxkamad horteed laga caddeeyo in uu guurkaasi mid qasab ah ahaa. Sidaas darteed waa muhiim in la iska diido marka hore waana in la xasuustaa in markaas oo kale uu sharcigu dhinacaaga la jiro.
Waxaad guursan kartaa markii aad 18 sano gaaro. Dadka da’doodu u dhaxayso 16 iyo 18 waa guursan karaan laakiin waa in ay markaas oggolaansho ka helaan hoggaanka gobolka. Haddii qofku uu qabo qof kale ma guursan karo ilaa ay qokaas is furaan. Qofku haddii uu jaa xaas yahay mar kasta waa uu iska furi karaa qofkaas halkaan Swidhan, laakiin lama hubo in la heli karo furitaan waddan kale ah.